အသားအရေ လှဖို့ ရေနွေးကြမ်း သောက်ကြစို့ - Hello Sayarwon
အသားအရေ ကျန်းမာ ကောင်းမွန်မှုက အလှတိုးစေတဲ့ အချက်တစ်ခုပါ။ အသားအရေ လှပမှုက အများကြားမှား ထင်းခနဲ လှပနေစေဖို့ ထောက်ကူပေးနိုင်ပါတယ်။
အသားအရေ လှပဖို့က မိန်းကလေးတွေမှာပဲ လိုအပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ အမျိုးသားတွေမှာလည်း အသားအရေ လှပကျန်းမာဖို့ လိုပါတယ်။ အသားအရေ လှပဖို့အတွက် အသားအရေ ထိန်းသိမ်းတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို သုံးရမယ် မဟုတ်လား။ ယောကျ်ားလေးတွေအတွက်ကျ တစ်မျိုးကြီးလို့ ထင်နေစရာ ရှိပါတယ်။ တကယ်ကတော့ အသားအရေထိန်းသိမ်းဖို့က လူတိုင်း ကျား၊ မ မရွေး လုပ်ရမယ့် အရာတစ်ခုပါ။
အသားအရေ လှပဖို့ အသားအရေ ထိန်းသိမ်းတဲ့ ပစ္စည်းတွေကပဲ လုပ်ဆောင် ပေးနိုင်တာလား …….
အသားအရေ လှပဖို့ အသားအရေ ထိန်းသိမ်းတဲ့ ပစ္စည်းတွေကပဲ လုပ်ဆောင် ပေးနိုင်တာလား ……. ဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အသားအရေ လှပဖို့ အစားအသောက်တွေကလည်း လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခေါက်တော့ အသားအရေ လှပဖို့ အမျိုးသမီးတွေရော အမျိုးသားတွေပါ လက်လှမ်းမီသလို နေ့စဉ် စားသုံးမိနေတဲ့ အရာလေးက ဘယ်လိုများ ထောက်ပံ့ပေးနေလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ဒါလေးကတော့ အမျိုးသမီးတွေ လက်ဖက်စားရင်း သောက်မိတတ်သလို အမျိုးသားတွေလည်း လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ထိုင်ရင်း သောက်မိတတ်ကြတဲ့ ရေနွေးကြမ်းလေးပါ။
ဒီတော့ ရေနွေးကြမ်းလေးက အသားအရေ လှပဖို့အတွက် ဘယ်လိုများ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်လဲဆိုတာကို ပြောပြပေးသွားပါမယ်။
အသားအရေလှဖို့ ရေနွေးကြမ်း သောက်ကြစို့
ရေနွေးကြမ်းကတော့ နေ့စဉ် သောက်သုံးမိနေတဲ့ အရာမို့လို့ အားလုံးအတွက် အပန်းမကြီးလောက်ဘူး ထင်ပါတယ်။ အသားအရေ လှဖို့ ရေနွေးကြမ်း သောက်ကြစို့ ဆိုတော့ ဘာတွေများ ကောင်းလို့လဲဆိုပြီး သိချင်နေပြီဟုတ် ….. အတူတူ ဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
ရေနွေးကြမ်းလေးက အသားအရေကို အခုလိုလေးတွေ လှပစေတာပါ။
ရေနွေးကြမ်း သောက်တဲ့အခါ ထည့်သောက်တဲ့ လက်ဖက်ခြောက်မှာ polyphenolic compound EGCG (epigallocatechin-3-gallate) ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒီ ပစ္စည်းလေးက ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်အာနိသင် ကြွယ်ဝသလို သဘာဝအတိုင်း အရောင်ကျစေနိုင်ပါတယ်။
ဝက်ခြံတွေ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးသလို အခြား အရေပြား ပိုးဝင်တာတွေ မဖြစ်စေဖို့လည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ဝက်ခြံကြောင့် ရောင်ရမ်းတာတွေကိုလည်း သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
အရေပြား ကင်ဆာ ကာကွယ်ပေးတယ်
၂၀၀၃ ခုနှစ်က လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ သုတေသန ရလဒ်တွေအရ ရေနွေးကြမ်း သောက်ပေးတာက အရေပြားကို ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် အလွန်အကျွံ ထိတွေ့မှုကြောင့် ထိခိုက်တာကနေ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
နေရောင်ထဲမှာပါတဲ့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကြောင့် အသားအရေ ထိခိုက်ပျက်စီးတာကိုလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ရေနွေးကြမ်း သောက်တဲ့အခါ ထည့်သောက်တဲ့ လက်ဖက်ခြောက်မှာ EGCG ပါဝင်တာကြောင့် အဆီပြန်တာမျိုး မဖြစ်စေဖို့ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ် အဆီဂလင်းတွေက အဆီပိုတွေ မထုတ်စေဖို့ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ချွေးပေါက်တွေကို ပွင့်စေနိုင်ပါတယ်။ အဆီပြန်တဲ့ အသားအရေ မဖြစ်စေဖို့ သောက်ပေးလို့ ရပါတယ်။
လေ့လာမှုတွေအရ လက်ဖက်ခြောက်မှာပါတဲ့ အဆီအနှစ်က အသားအရေကို တင်းရင်းစေပြီး အရေပြားကို အရွယ်တင်စေနိုင်ပါတယ်။ အစိုဓာတ် ထိန်းပေးပြီး အသားအရေကို နေရောင်ကြောင့် အစက်အပြောက်တွေ မဖြစ်စေဖို့လည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ရေနွေးကြမ်းကို သောက်သုံးပေးလို့ ရသလို အရေပြားပေါ်ကို တိုက်ရိုက် လိမ်းပေးလို့လည်း ရပါတယ်။ အရေပြားပေါ် တိုက်ရိုက် လိမ်းပေးတာက အရေပြားပေါ်မှာ ရှိတဲ့ ဆဲလ်သေတွေ၊ ဘက်တီးရီးယားတွေ၊ မှိုပိုးတွေကို ထိထိရောက်ရောက် ဖယ်ရှားပေးနိုင်မှာ ဖြစ်သလို ချွေးပေါက်တွေကိုလည်း ပွင့်စေမှာပါ။
အသားအရေကို ကြည်ကြည်လင်လင်လေး လှပချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ရေနွေးကြမ်းထဲကို သံပုရာရည် နည်းနည်းလောက် ညှစ်ပြီး သောက်ပေးလို့ရသလို လိမ်းပေးလို့လည်း ရပါတယ်။
ကဲ …… အခုလို အကျိုးကျေးဇူးကောင်းလေးတွေ ရနိုင်တယ်ဆိုတော့ အသားအရေ လှဖို့ ရေနွေးကြမ်း သောက်ကြစို့ နော် လေဒီတို့ရော ဘရိုတို့ရော ……
Skincare Tips: Drinking Green Tea Benefits Your Skin In These Ways https://food.ndtv.com/food-drinks/skincare-tips-drinking-green-tea-benefits-your-skin-in-these-ways-2088328 Accessed Date 15 October 2021
Top6Benefits of Green Tea for Skin https://www.100percentpure.com/blogs/feed/top-6-benefits-green-tea-for-skin Accessed Date 15 October 2021
အသားအရေက purging ဖြစ်နေတာလား။ Breakout (ကန်ထွက်) နေတာလား................